Cabdal-caziiz iyo Xamar-weyne oo si wada jir ah u lumiyay fursadaha Faa’ideysiga tartanka. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Cabdal-caziiz iyo Xamar-weyne oo si wada jir ah u lumiyay fursadaha Faa’ideysiga...
Cabdal-caziiz iyo Xamar-weyne oo si wada jir ah u lumiyay fursadaha Faa’ideysiga tartanka.
Muqdisho (SNTV)-Habeenkan waxaa ku ballansanaa tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadan degmooyinka xeebta dhaca ee Cabdal-zaziiz iyo Xamar-weyne.
Degmada Cabdal-caziiz dhammaan su’aalihii 7-ahaa ee la weydiiyay mid qura oo ah tan 5-aad ayay ka jawaabtay, kamana faa’ideysaan fursadaha ay lumiyeen dhiggeeda xamar-weyne waxa ay sidaas ku heshay 2-dhibcood.
dhanka kale waxaa iyana si lamid ah la weydiiyay 7-su’aalood degmada xamar-weyne, waxa ay si toos kaga jawaabeen 3-kamid ah , wax ka faa’ideysi ahna ma aysan haleelin, waxa ayna sidaas ku heshay 6-dhibcood.
Degmada xamar-weyne ayaa ugudubtay waraagga 2-aad ee tartanka, waxaana Cabdal-caziiz ay ku biirtay degmooyinka isaga haray tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadan.
Habeen dambe waxaa ku ballansan tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadan oo ay tabineyso warbaahinta Qaranka sidoo kale uu taaba gelinayo maamulka gobalka Benaadir degmooyinka kala ah Yaaqshiid iyo Dharkeenleey.
Previous article“warbixin” Salaadda waa Rukniga ama Tiirka-2aad ee Tiirarka Islaamka Shahaadateynka ka gadaal.
Next articleMaamulka G/Banaadir oo shaqsiyaad been abuur sameynayey u gudbiyey hay’adaha Garsoorka iyo Amniga
Ra’iisul Wasaare Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo dalka dib ugu soo laabtay “SAWIRRO”
Wasaaradda Caafimaadka oo xaqiijisay in 134 qof oo cusub ay ka bogsoodeen Feyruska Karoona
Madaxweyne Farmaajo oo gaaray dalka Uganda “SAWIRRO”
Ra’iisul Wasaare Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo dalka dib ugu...
Wasaaradda Caafimaadka oo xaqiijisay in 134 qof oo cusub ay ka...